mardi, 04 juin 2019 21:27
Fetim-pirenena: Nizara sainam-pirenena ny minisitry ny filaminam-bahoaka
Manentana ny Vahoaka hanangana ny sainam-pirenena ny polisim-pirenena ho mariky ny faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantena, ho mariky ny fitiavan-tanindrazana.
Nidina ifotony nanentana sy nizara saina teny Manarintsoa Isotry sy Andavamamba ny minisitry ny filaminam-bahoaka Contrôleur Général de Police Rafanomezantsoa Roger.
Efa natomboka tamin'ny mpiara-miasa ny fizarana sainam-pirenena eo anivon'ny Polisim-pirenena.
mardi, 04 juin 2019 20:30
Ikongo: Mitoka-monina vokatry ny fiakaran'ny rano
Mijojo ny orana aty amin'ny Distrika Ikongo tato anatin'ny telo andro izao, nanomboka tamin'ny Alahady 2 jona. Miakatra ny rano, tapaka vokatr'izany ny lalana mampifandray an'i Ifanadiana amin'i Ikongo.
mardi, 04 juin 2019 16:49
Kitra vehivavy – Amboara erantany: Iza no handimby toerana an’i Etazonia ?
Hotanterahina any Frantsa ny 7 jona ka hatramin’ny 7 jolay 2019 ny andiany faha-8 amin’ny fiadiana ny amboara erantany amin’ny baolina kitra, sokajy vehivavy, karakarain’ny FIFA.
Firenena miisa 24 no handray anjara, mitsinja amina vondrona enina. Tanàna miisa sivy no hilalaovana mandritra ny iray volana. Ny fifandonan’i Frantsa sy Korea Atsimo, ao amin’ny vondrona A, no hanokatra ny lalao amin’ny 7 jona 2019 ao amin’ny kianja « Parc des Princes ».
Isaky ny efa-taona ny fifaninana, ary tamin’ny 1991 ny andiany voalohany natao tany Chine. Etazonia no nandrombaka ny amboara tamin’io. Efa in-telo voahosotra ho tompon’ny amboara ny bekintana, ary eo ampelantanany ny amboara farany tamin’ny 2015.
Efa in-droa nandrombaka ny amboara i Alemaina ary efa samy voahosotra ho tompon’ny amboara in-dray mandeha avy i Norvezy sy Japon.
mardi, 04 juin 2019 16:15
Fifidianana depiote: Saro-toerana ireo lehibena Andrim-panjakana taloha
Lehibena Andrim-panjakana taloha miisa roa no isan’ireo kandida miisa 810 nenken’ny CENI hifaninana ho eny Tsimbazaza, amin’ireo toerana miisa 151 mandrafitra ny Antenimieram-pirenena Malagasy, dia ny Pr Andrianarisoa Ange Christophe Félix, filohan’ny Antenimieram-pirenena teo aloha, sy Monja Roindefo Zafitsimivalo, praiminisitra notendrena voalohany tamin’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita.
Saro-toerana ireto lehibena Andrim-panjakana taloha ireto, amin’ity hazakazaka mankao Tsimbazaza ity, raha tarafina amin’ny fironana ao amin’ny tranokalan’ny CENI amin’izao.
Kandidan’ny antoko AREMA tao Antananarivo-III, Faritra Analamanga i Pr Andrianarisoa Ange Christophe Félix.
Toerana 2 no nifaninanana ao, 7 kosa ny kandida. Raha ny fironana ao amin’ny tranokalan’ny CENI dia 1.75% ny vokatra vonjimaika azony. Ny kandidan’ny TIM (48.67%) sy ny IRD (32.88%) no roa voalohany mitarika ao amin’ity Distrika Antananarivo-III ity.
mardi, 04 juin 2019 15:22
Fifidianana depiote: Kandidan’ny IRD miisa telo, nahazo vato mihoatra ny 80%
Eo ampiandrasana ny vokatra feno vonjimaika havoakan’ny Vaomiera mahaleotena momba ny fifidianana (CENI) dia efa hita taratra amin’ireo fironana ao amin’ny tranokalan’ny CENI amin’ireo Distrika samihafa.
Ao anatin’izany no ahitana fa kandida miisa telo, narotsaky ny vovonana Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRD), mitarika amin’ny isam-bato mihoatra ny 80%.
Voalohany amin’ireo i Rabenirina Jean Jacques, kandida ao amin’ny Distrikan’i Betioky Sud Faritra Atsimo-Andrefana. Toerana tokana no ifaninanana ao, ary telo ny kandida.
Mitarika vonjimaika amin’ny isam-bato 88.64% ity minisitra teo aloha ity. Efa voafidy depiote tamin’ny anaran’ny antoko MMM (Malagasy Miara-Miainga) i Rabenirina Jean Jacques tamin’ny 2013.
mardi, 04 juin 2019 15:14
Lionel Messi: Mpampidi-baolina be indrindra tamin’ny « Ligue des champions » 2018-2019
Baolina miisa 12 no matin’i Lionel Messi (FC Barcelone) tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Eoropa amin’ny baolina kitra na « Ligue des champions ». Izy no mpampidi-baolina be indrindra nandritra taom-pilalaovana 2018-2019.
Fanin’eniny izao Lionel Messi no voahosotra ho mpampidi-baolina tamin’ny « Ligue des champions ». Fanin’eniny ihany ko izy no nibata ny kiraro volamena na « soulier d'or » noho io hamaroan’ny baolina matiny io.
Mpampidi-baolina faharoa manaraka azy i Lewandowski (Bayern Munich), 8 ny isan’ny baolina matiny.
Teo amin’ny laharana fahatelo mitovy, samy namono baolina 6 avy i Agüero (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Marega (Porto) ary Tadic (Ajax Amsterdam).
mardi, 04 juin 2019 15:11
Fandriampahalemana: Namafisina ny fiarovana ny HCC sy ny CENI
Namafisina tanteraka ny fiarovana ny HCC sy ny CENI ka nasiana Zandary avy amin’ny hery vonjy taitra ety ivelany, ankoatry ny mpiambina efa ao anatiny.
Noraisina ny fepetra taorian’ny fidinana ifotony nataon’ireo Minisitra isany tomponandraikitry ny fandriampahalemana nanao fitsirihana ifotony tamin'ireo toerana maro teto Antananarivo ny alin'ny alatsinainy 3 jona 2019.
Namafisina ihany koa ny fifehezana ny fiarovana an'Antananarivo-Renivohitra ho fisorohana sy fiahiana ny fandriam- pahalemana raha misy tranga asan-jiolahy sy fakàna an-keriny.
Laharana maitso :
mardi, 04 juin 2019 14:57
Beroroha: Noroahina tsy ho mpampianatra fa TIM
Misy akony ratsy ho an’ny Tiako i Madagasikara (TIM) aty amin’ny Distrika Beroroha ny fifidianana solombavambahoaka natao farany teo. Toerana tokana no ifaninana taty, telo ny kandida. Laharana fahatelo vonjimaika ny TIM, mitarika vonjimaika amin’ny isam-bato maherin’ny 80% ny kandidan’ny IRD.
Vokatr’io dia iharan’ny antsojay ny mpitarika ny Tiako i Madagasikara aty Beroroha. Mpampianatra miisa telo izao no niharan’ny fanilihana noho ny fironana politika.
mardi, 04 juin 2019 14:56
Ambohidratrimo: Ravan’ny Zandary ny tambazotra rongony
Saronan’ny Zandary avy ao amin’ny Vondron-tobiparitry ny Zandarimaria Ambohidratrimo ny tambazotra mpivarotra sy mpidoroka rongony ao amin'ny faritra Ambohitratrimo taorian'ny fanangonam-baovao sy ny fikarohana nataon'izy ireo ny 2 sy 3 jona 2019.
Olona dimy no voasambotra teo ampanaovana ny asa ratsiny teny Anosiala sy Ambohimanarina. Tratra niaraka tamin'ny rongony milanja 10 kilao sy fehezan-taratasy maro fidorohana izy ireo.
Araka ny fahefana nomena ny Filoham-pirenena, noho ny fahataperan'ny andro fiasan'ny Solombavambahoaka, dia nanolotra didy hitsivolana na ordonnance izy anitsiana ny teti-bolam-pirenena ny taona 2019.
Efa neken'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana izy io, miaraka amin'ny fanamarihana maromaro.
Hatreto aloha ny Filoham-pirenena mbola tsy nanao sonia ny volavolan-dalàna niverina avy any amin'ny HCC, ka mbola mijanona ho volavolan-dalàna ihany izany aloha ity teti-bola ity, fa raha ny lalàna no arahina dia mbola mihatra ihany izany ilay teo aloha, efa lanin'ny solombavambahoaka farany teo.
Toy izao kosa, na izany aza, ireo tsara ho fantatra amin'io teti-bola nasiam-panitsiana io: